VaRemba - Wikipedia
(Redirected from Remba)
VaRemba (kuti Remba chiShona muZimbabwe uye muchiVenda kuSouth Africa zvakafanana nekuti Lemba) rudzi rwevanhu vatema vanowanikwa muZimbabwe, South Africa, Malawi and Mozambique. Umbowo hwesainzi pamwe nengano zvoniwirirana kuti madziteteguru avo vaive verudzi rwechiJudah. KuSouth Africa rudzi urwu runodanwa nezita rokuti Lemba. MuZimbabwe VaRemba vanodanwawo kuti vaMwenyi.
Vanhu verudzi rwaVaRemba vanotaura mitauro yechiBantu inosanganisira ChiShona, Venda neKalanga. VaRemba vane tsika dzavanotevedza nemaitiro eChinamato anotodza kana kufanana nemaitiro echiJudah. Zvisinei kune vamwe vavo nhasi vanotevedza chiKristu vamwe vachitevedza chiMuslim, kunyangwe vazhinji vachichengetedza tsika dzinofanana nemaJudah.
Tiri muZimbabwe vaRemba vanowanikwa mumatunhu akasiyana. Mudunhu reMberengwa vanowanikwa vachiera mutupo we zhou vachidanwa kunzi vaShavi kana kuti vana Mavedzenge. KwaGutu (Hwingwiri, Rufurwokuda, Muzungu, Faraoh,Muremba,Mumwenyi, Vasengwesengwe). Buhera, Guruve, Masvingo District (kwaMurinye), Muzarabani nedzimwe nzvimbo vanowanika vachiera mutupo we Zhou kana kuti Mbeva uye vachidanwa kuti vanaMusoni kana kuti vaShavi.
DETEMBO[chinja | edit source]
Muzungu vasingarimi, vasibati nyama
Vanovetera yabva pamoto, vasengwengwe
Varungu vakabva kusina mhezi,
Vauyi vakabva kusina mhezi
Vasingasoni neshinda nhema
Vakashoshonora shono mumwena
Aiwa zvaitwa musoni
Vahaji veshambo chena.
Maita Zhou Maita Hamisi Chirimazhira Vamangandanganda Musoni VamaStaha Mushavi
Zvinofanana nemaJudah nemaArab[chinja | edit source]
Tsika dzevaRemba dzinofanana nemaJudah ndidzo dzinotevera:
Vanodana Mwari kuti Nwali.
Vanotevedza Sabata (Shabbat).
Havadyi nyama yenguruve sezvinotaurwa nebhuku remirayiro yavaJudah reTorah. Zvakare vanotevedza kusasanganisa zvikafu kunorambidzwa mutsika dzeKosher dzechiJudah.
Vanotevedza tsika yokudzingiswa kwevarume.
VaRemba vanotevedza tsika yokusaroorana nemamwe marudzi.
Mazita emadzinza evaRemba anoda kunofanana neemhuri dzechiArab uye dzechiJudah. Muenzaniso ndiwo mazita aya: Rufurwokuda, Hwingwiri, Faraoh, Sadiki, Hasane, Hamisi, Haji, Bakeri, Sharifo naSaidi. Zvakadaro vamwe vavo vanoshandisawo mazita akangofanana nevamwe verudzi rweChiShona.
VaRemba vanozivikanwa vanosanganisira: Fungisai Zvakavapano-Mashavave; Courage Mashavave; Durajadi Simba; Rudo Mathivha; Hamandishe Maramwidze (anomirira Gutu North mudare reParamende); Tinofa Mutevedzi (a demographer,population health specialist, health bio-ethicist and research operations expert); Munamato Mutevedzi (current Chief Magistrate of Zimbabwe), Sylvester Hashiti (Advocate of the Superior Courts of Zimbabwe), Justice Foroma (Judge of the High Court of Zimbabwe), Jacob Mutevedzi (Commercial Lawyer and Arbitrator). Nevamwewo vanosanganisira Stanley Chinho, Tapiwa Chatora and Willie Mutangadura.
Mururimi rweLuwanga vanoti eshilemba (turban) kureva chiremba.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=VaRemba&oldid=84415"
This page was last edited on 24 Kukadzi 2021, at 21:39.